Ungayicima njani iNkulumbuso ye-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 385
I-YouTube yeNkulumbuso sesinye sezixhobo ezilungileyo Esungule iqonga levidiyo esasazayo kwiminyaka yakutshanje. Le nguqulo ivumela uthotho lwemisebenzi engenayo ingxelo yasimahla. Unokuzikhuphelela iividiyo ngokuthe ngqo kwi-app kwaye uyeke ukubona iintengiso ezicaphukisayo.
Ukuba nangasiphi na isizathu unqwenela rhoxisa ubulungu bakho bePremiyamu yeYouTube kwaye awazi ukuba ungayenza njani, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo. Apha siza kukufundisa inyathelo ngenyathelo lokucima inkonzo ye-YouTube yeNkulumbuso kuso nasiphi na isixhobo.
Kodwa kuqala ... Yintoni iNkulumbuso ye-YouTube?
Sele uninzi lwabasebenzisi beqonga begqibe ekubeni babhalise kule nguqulo intsha yeYouTube. Nangona inguhlobo oluhlawulelweyo, inyani kukuba kufanelekile kutyalo-mali.
I-Premium yeNkulumbuso ayikho ngaphezu koko Inguqulelo ehlawulelweyo enikezelwa liqonga levidiyo elidumileyo kubasebenzisi bayo. Ngayo unokulibala ngonaphakade malunga neentengiso ezingenayo ezihlaselayo ezivela ngalo lonke ixesha kwinguqulelo yasimahla. Apha iintengiso azisekho.
Ukwanazo nezinye iindlela, umzekelo khuphela nayiphi na ividiyo eposwe eqongeni. Akusayi kubakho mfuneko yokubhenela kwamanye amaphepha okanye usetyenziso lokukhuphela umxholo kwiYouTube. Ngohlobo lweNkulumbuso ungayenza kwi-app efanayo.
Rhoxisa iNkulumbuso ye-YouTube kwiPC
Ukuba ufuna ukucima umrhumo wakho we-YouTube Premium kwaye ungaqhubeki nokonwabela umxholo okhethekileyo ekubonelelwa liqonga, ungayenza nakweyiphi na ikhompyuter. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
Vula i-YouTube kwaye ungene kwiakhawunti yakho
Yenza nqakraza kwifoto yeprofayile (kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini)
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Ukuthenga kunye nemirhumo"
Khetha ukhethoI-YouTube yokuqala"
Cofa ku "Yenza kungasebenzi ukubhalisa"kwaye ilungile.
Rhoxa kwiakhawunti yakho kaGoogle
Ngaba uyazi ukuba unokurhoxisa ubulungu bakho bePremiyamu ye-YouTube ngaphandle kokufikelela kwiqonga levidiyo? Kunjalo. Unokhetho lokungabhalisi kwiakhawunti yakho kaGoogle. Nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe:
cofa malunga nomfanekiso wakho weprofayile (kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini)
Cofa kwindawo okhetha kuyo "Lawula iakhawunti yakho kaGoogle"
Yiya kukhetho "Iintlawulo kunye nokubhaliselwa"
Uya kuyibona umhla wokugqiba umrhumo
Ngena kwi lawula imirhumo Kwaye uya kuthunyelwa kwiqonga leYouTube apho kuya kufuneka uphinde amanyathelo afanayo achazwe ngaphambili.
Rhoxisa iNkulumbuso ye-YouTube kwifowuni yakho
Unokukhetha kwakhona rhoxisa ubulungu bakho bePremiyamu yeYouTube kuyo nayiphi na ifowuni Amanyathelo alula ukuwalandela:
Vula Youtube kwiselula okanye ithebhulethi yakho
cofa malunga nomfanekiso wakho weprofayile kwikona ephezulu ngasekunene
Cofa ku "Lawula ubhaliso lwakho lwePremiyamu yeYouTube"
Kuya kufuneka bonisa isizathu ofuna ukuzikhupha kuzo
Qinisekisa kwaye silungile.
Kubalulekile ukucacisa ukuba nje ukuba la manyathelo sele enziwe umrhumo uya kuhlala usebenza de iphelelwe lixesha.
1 Kodwa kuqala ... Yintoni iNkulumbuso ye-YouTube?
2 Rhoxisa iNkulumbuso ye-YouTube kwiPC
3 Rhoxa kwiakhawunti yakho kaGoogle
4 Rhoxisa iNkulumbuso ye-YouTube kwifowuni yakho